Jikelele open-ubomi, nesendlu pa, osemqoka-ukubona indlela
トップページ ＞ 言語 ＞ コーサ語 ＞ Jikelele open-ubomi, nesendlu pa, osemqoka-ukubona indlela
※ lokugqibela Nceda thelekisa ku njengoko mkhuba of the shishino yonke
pa wenziwe enye umdlalo abathengi kunye iivenkile ukuba wina okanye ulahlekelwe. Noko ke, ukuba njalo kuwo, ngenxa yokuba abathengi akayi kuza evenkileni kamsinya, kwicala parlour pa, waphinda okanye wachacha kwaye ngaphandle, uza kuqhubeka akumkhululi lowo umthengi. Kwihlabathi ngamaqhinga ezinjalo, nokuba Minukeru ixesha lokuqala, ube yinto ephambili echaphazela yindlela yokuphumelela.
ixesha lokuvula, kuya kwahluka ngenxa kwivenkile nganye. I ufuna ukwazi kuqala kwiinto zonke, ukuba bathi ukuba kwisigaba sokuqala zegumbi pa, kungekhona ukuzinikela umba, ukuququzelela ngeenxa ekuqaleni ngezikhonkwane apha naphaya, ukuze ibhola bunciphe, into yokuba nabo hlengiswa ngeenxa zonke izikhonkwane kuya kubakho. Okanye, ukuphakamisa okanye ukuthoba isethingi e Horukon, akubonakali ngathi ungaphinda ngaphandle, kuba ROM imiselwa, andazi ukuba kwicala yabalawuli.
Noko ke, ukuba ulungise isikhonkwane ukuba eninzi ujikelezo, ngokuthi, umzekelo, ibandakanya isethi Horukon, ngokwandisa inani iLotto izihlandlo ezininzi ROM, kuya kuba lula ukuba ukubetha. Kuyinto, mna into yokuba lo mba wabonwa kwicala pa nakwesiphi na isimo esinjalo. Le ngongoma, khumbula.
into ekuthiwa umba ixesha, ngaphandle kwisiqingatha ngolokuqala enyangeni leyo, ukuba kukho kwakhona elibe pa kwisiqingatha sesibini kwakhona, kukho ke vice versa. Ngoko, siyazi iimpawu pa zegumbi zeli xesha evulekileyo, zama ukuqonda ubomi evulekileyo evenkileni Playing wonke. Kuqala kwinto zonke, ixesha kuthiwa ixesha evulekileyo, abawusondezayo phakathi ku-kalukhuni, ndoxelelwa ngubani ezininzi ngenyanga, hayi nje ixesha elithile, kwiimeko ezahlukeneyo enyangeni leyo, enyanisweni, ikho.
injongo ethile, ukusuka apho kukhutshwe intlawulo, 's ixesha ukuba kwiintsuku ezimbalwa ezilandelayo zezona evulekileyo. Ukuba umcimbi engento, unako abaninzi ukushiya kwiintsuku ezimbalwa nail hlengiso.
Ukongeza, nkqu kwimeko intlawulo kunye nokusebenza, ukuthengiswa kunye ingeniso epheleleyo njengoko kwemicimbi, ukuze ukutsala abathengi ekuyeni ekupheleni nokufunyanwa enyangeni leyo, ngenxa yokuba kukho ityala imifuziselo inani e njengoko kukho utshintsho sentlalo kunye nail elungileyo , Hall emva kokuba umcimbi omkhulu Kufuneka ugcine ukubukela. Emva iziganeko
, kunye neemodeli enjalo namhlanje, imifuziselo ziyacetyiswa, ndicinga ukuba kwakhona ngumbono omhle umngeni ngenxa yethuba ophezulu. Olu tyando ijonge ukuba baphenjelelwa kakhulu imozulu. Ngosuku olulandelayo, xa kukho uqikelelo yemozulu na elahlekileyo, kukho kungenzeka ukuba imveliso uya bhanyalaza.
Ngamaxesha anjalo, okanye vula isikhonkwane kancinane, nokuba ukuba isicwangciso eliphezulu isebenzayo, malunga isicwangciso eliphakathi kwakhona ukuba angene ziiyunithi ezininzi. Weather ngosuku okubi, ngqo uye emva kungenjalo, ungase uye yafakwa encinane, itheyibhile obuncamisileyo Ayifumaneki. Emva koko, ufuna ukuba ajolise ekupheleni umhla replacement Xintai.
Xintai ngosuku lokuqala, zokulindela kamva kutsala abathengi Ngosuku olulandelayo, kukho evenkileni ukuze akhuphe intlawulo. Enoba ixesha ivulekileyo, oko kuqinisekiswa ukuba isantya ojikeleza ngaso ongange amawaka yen. Isantya ukujikeleza lo yen amawaka, kwaye ngaphaya nomda, kukuba iye yaveza ekuqaleni isikhonkwane. Kwimeko, nesendlu pa leyo kuyalungiswa e Horukon, kuye kuthiwa okanye ukulungisa le hit okuba enkulu. Usuku leyo kuthiwa open-ubomi, imalunga ezintathu kalukhuni.
ezithile bahlola ukuba ukukhangela ngayo kuphela Robo data ngokusebenzisa nesendlu pa abaninzi ngayo. Okanye, kuphela evenkileni ukuba uzimanye kunye neenkonzo, ezifana site data Robo Seven kunokwenzeka kwakhona ukuba kufakwe endaweni kuloo nkonzo. , Ufuna ukuba ajolise ekupheleni umhla replacement Xintai.
ezithile bahlola ukuba ukukhangela ngayo kuphela Robo data ngokusebenzisa nesendlu pa abaninzi ngayo. Okanye, kuphela evenkileni ukuba uzimanye kunye neenkonzo, ezifana site data Robo Seven kunokwenzeka kwakhona ukuba kufakwe endaweni kuloo nkonzo.